Abaalmarinta Seychelles: Abaalmarinta Jasiiradda Top ee Afrika iyo Bariga Dhexe
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Abaalmarinta Seychelles: Abaalmarinta Jasiiradda Top ee Afrika iyo Bariga Dhexe
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Socdaalka Seychelles + Waqtiyada firaaqada
Seychelles ayaa mar kale garaacday tartankii markii afaraad oo ay ku guuleysatay, Safarka caanka ah ee Travel + Leisure 2021 Abaalmarinta ugu Wanaagsan Adduunka oo ah jasiiradda ugu sarreysa Afrika iyo Bariga Dhexe.
Mid ka mid ah Akhristayaasha Safarka + Madaddaalada ayaa ku sifeeyay Seychelles inay tahay "yaabka sideedaad ee adduunka."
Meesha loo socdo ayaa ku soo baxday kaalintoodii ugu sarraysay, iyadoo dhalisay 88 dhibcood.
Seychelles waxay caan ku tahay goobihii dabiiciga ahaa ee si fiican loo keydiyay sida Vallée de Mai, oo ka mid ah labada jasiiradood ee 115 jasiiradood ee labada meelood ee UNESCO ee Dhaxalka Adduunka ee loogu talagalay aadanaha.
Dib u soo celinta kaalinta 1aad (oo iyaduna la qabtay sannadka 2019), Seychelles, oo ah janno aad loo ammaanay oo ku taal Badweynta Hindiya, iyo “yaabka siddeedaad ee adduunka” sida mid ka mid ah Safarada + Akhristaha Madadaalada ayaa ku sifeeyay, kuna ammaanay “quruxdeeda” , ”Ayaa ku soo baxay kaalintooda ugu sarreysa, iyagoo dhaliyay 88 dhibcood, waxaana ku xiga Zanzibar iyo Mauritius oo galay kaalinta labaad iyo saddexaad.
Sanadkan taagan ayaa ah mid aad u fog sidii hore, majaladda ayaa tiri, iyadoo ku dhawaaqaysa natiijooyinka sahanka taas oo u oggolaanaysa akhristayaasha in ay ka fiirsadaan waaya-aragnimadooda safarka, waxayna soo jeedinayaan in la cusbooneysiiyo qaddarinta meelaha bixiya quruxda dabiiciga ah ee aan la qiyaasi karin iyo, meelo badan, tiro yar dad badan. Sharafyada abaalmarintu sida caadiga ah waxay dhiirrigeliyaan dadka safarka ah iyagoo raadinaya waayo -aragnimada ugu abaal -marinta badan adduunka.
Dhirta kulaylaha oo aad u qurux badan, xeebo cad-cad, meel aad u qurux badan, qalaad iyo biyo turquoise cad, Seychelles sidoo kale waxaa caan ku ah goobihiisa dabiiciga ah ee sida fiican loo ilaaliyo sida Vallée de Mai, oo ka mid ah 115-jasiiradood ee jasiiradaha labada meelood ee UNESCO ee Dhaxalka Adduunka ee loogu talagalay bani’aadamka, dhirta iyo xayawaanka u gaarka ah iyo jardiinooyinkeeda badda, kuwaas oo dhammaantood soo jiitay Safarka & Akhristayaasha waqtiga firaaqada.
Iyadoo ka hadlaysa abaalmarinta, Marwo Bernadette Willemin, Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Dalxiiska Seychelles xusay in helitaanka aqoonsigaas muhiimka ahi ay sharaf u tahay meesha loo socdo.
“In mar labaad loo magacaabo Jasiiradda ugu Wanaagsan Adduunka ee Afrika iyo Bariga Dhexe 2021, waxay farxad u tahay meesha yar ee aan u soconno. Waxay u xaqiijinaysaa warshadaha guud ahaan inay ogaadaan in booqdayaashayadu aysan aqoonsan kaliya quruxda dabiiciga ah ee jasiiradeena laakiin sidoo kale khibradda oo dhan oo naga dhigaysa mid gaar ah oo hubaal ah 'Adduun kale.' ”
Magacaabista goobta qalaad waxay ka soo baxdaa sahan-sannadeedka ay samaysay Travel + Leisure, kaas oo u oggolaanaya akhristayaasha joornaalka socdaalka ee fadhigiisu yahay New York inay qiimeeyaan waaya-aragnimadooda safarka adduunka oo dhan. Akhristayaashu waxay miisaamayaan hudheelada ugu sarreeya, jasiiradaha, magaalooyinka, shirkadaha diyaaradaha, khadadka dalxiiska, isbaarooyinka, iyo in ka badan, waxay ku qiimeeyaan jasiiradaha astaamaha soo socda: soo jiidashada dabiiciga ah iyo xeebaha, waxqabadyada iyo indhaha, makhaayadaha iyo cuntada, dadka iyo saaxiibtinimada, iyo qiimaha guud. Seychelles waxay ku xirneyd Nr 24 oo ay la wadaagtay Sri Lanka jasiiradaha ugu sarreeya majaladda abaalmarinta adduunka.
Sahanka Abaalmarinta ugu Wanaagsan ee Sannadkan wuxuu u furan yahay codaynta Janaayo 11 illaa Maajo 10, 2021, maadaama meelaha adduunka oo dhan ay kor u qaadayaan xayiraadaha COVID-19.